The Best Tech Gifts for Usuku kaTata | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 17/03/2021 11:56 | ngokubanzi
El Usuku loyise Ngomhla ka-19 Matshi uyeza kwaye mhlawumbi lixesha elifanelekileyo lokumbonisa ukuba umthanda kangakanani ngesipho esinomdla. Oko kunxiba ukuba ufuna ukuzama kakhulu, ezinye ii-headphone ezintsha okanye izithethi, okanye imveliso yakho yokuqala kunye nomncedisi welizwi ukuze ubone uninzi lwezibonelelo zokusebenza kwayo.
Ngesi sizathu, kwaye kuba sifuna ukwenza ubomi bakho bube lula kwiActualidad Gadget, Sikuzisa ezinye zezixhobo ezinomdla kakhulu ekunikeni uSuku lukaTata, jonga kwaye umangalise uyihlo ngendlela yoqobo.
Njengamaxesha onke, nangokuhambelana nomgca wethu wokuhlela, kwiActualidad Gadget sincoma kuphela iimveliso esizihlalutye kwiwebhusayithi yethu kwaye ezihlangabezana nomgangatho ophezulu, zihlala zithathela ingqalelo umgangatho wazo wexabiso / amaxabiso.
1 Ii-headphone kunye nokunxiba
2 Izithethi ezi-Smart kunye nomxholo wemultimedia
3 Ukuzonwabisa kunye nezixhobo
Ii-headphone kunye nokunxiba
Siqala ngesindululo ngee-headphone, kwaye kule meko siya kwenye yeemveliso zamva nje esiye sazihlalutya, iHuawei FreeBuds 4i, ii-headphone eziza neenzuzo ezininzi esele zikhona i-Huawei FreeBuds Pro, kodwa ngomlinganiso Umgangatho / ixabiso elingoyikiyo kuthathelwa ingqalelo ezinye zezixhobo zekhompyutha abazinikileyo. Banokucinywa kwengxolo okusebenzayo, ibhetri enkulu kuneeyure eziyi-7 zokudlala ngokuqhubekayo kunye nomgangatho ophezulu wokumamela. Ixabiso lokwazisa yi- € 69 ukuba sisebenzisa isaphulelo se- € 10 kwiwebhusayithi esemthethweni yeHuawei.
Thenga iHuawei FreeBuds 4i ngexabiso elihle kwiAmazon.
Ukuba into oyifunayo yimveliso yenye into premiumKwiActualidad Gadget sikwavavanye nengxolo yentloko yokucima iintloko. Kule meko, abo basothuse kakhulu ngomgangatho wexabiso labo / ngexabiso ibingu-X Ngu-Kygo A11 / 800, ii-headphone ezithengiswa ngemibala emibini eyahlukeneyo kwaye zibonelela ngepaneli yokuchukumisa, ukucinywa kwengxolo esebenzayo, Isicelo esinoqwalaselo lwaso kwaye ngakumbi ngexabiso lokudiliza i-euro ezingama-69,90.
I-Kygo A11 / 800, lolona tshintsho lukhulu lokurhoxiswa komsindo [Hlaziya]
Ngokwenxalenye yayo, ngoku sijikela kwiiwotshi ezifanelekileyo, enye yezona "zinto zinxitywayo" zithandwayo. Sibuyela kwakhona kwiHuawei, kwaye yile Watch Watch yayo 2 Pro Ibekwe njengesixhobo esihambelana nazo zombini i-Android kunye ne-iOS. Yimveliso ejikeleze ngokufanelekileyo enezinto zepremiyamu, imitya ehambelanayo kunye nenqanaba eliphezulu lokwenza ngokwezifiso enkosi kwivenkile yayo yokudayala. Ungayifumana kwi-199 euros kwezinye iindawo zentengiso, ukuvumela ukuba uhlangabezane nomgangatho / ixabiso lethu lemfuno.
Kwaye ukhetho lokugqibela ngokuchanekileyo sesinye sezixhobo zokugqibela esiye sazivavanya, iJabra Elite 75t, ii-headphone ezinokutshaja ngaphandle kwamacingo, inqanaba eliphezulu lokuchasana, ityala elicekeceke kakhulu kunye nezibonelelo zokusebenzisa iJabra Sound +, ewe, IJabra Elite 75t -...
Izithethi ezi-Smart kunye nomxholo wemultimedia
Izithethi ezi-Smart zingumyalelo wosuku kwaye azinakubakho kwipakethi yethu yezindululo. Ngokucacileyo siqala ngokungena, iAmazon Echo Dot entsha, isixhobo esithi nangona "sithintelwe" ubukhulu beso sikhule kakhulu. Uyilo lunomtsalane, ungaluthenga ngee-shades ezintathu zombala kwaye nokuba unqwenela ukuba likunike ithuba lokubandakanya iwotshi, iya kuba "yexabiso" kwibala lobusuku bukayihlo. Ixabiso ngama-euro angama-44 yenguqulo ngaphandle kwewotshi, nangona inguqulelo enewotshi inyukela kuma-euro angama-59.
Ukuba into oyikhangelayo endaweni yoko ngumdlali wemultimedia olungileyo, sicebisa iCube entsha yeTV yoMlilo, Inguqulelo ephambili nge-Fire TV OS eya kukuvumela ukuba ufikelele kwizicelo, faka ii-APK ze-Android, ubukele iNetflix, i-HBO kunye neMovistar + nomxholo kwisisombululo esiphakamileyo (ukuya kuthi ga kwi-4K iyahambelana). Kwinqanaba layo lomgangatho / ixabiso, liziko lokuzonwabisa le-multimedia elona lihle kuzo zonke esizizamile, ukusetyenziswa kwazo kukusemgangathweni kwinqanaba leemveliso zonke. Nangona kuyinyani ukuba ixabiso laseburhulumenteni li-euro ezingama-119, kwiimeko ezininzi kukho ukubuyiselwa kwakhona ngexabiso eliphantsi kwaye kunikezela ngeso sikhundla kwi-euro ezingama-79.
Ngendlela efanayo, sinokuhamba nezi mveliso ngesandi esikumgangatho ophezulu, kule meko sele uyazi ukuba sihlala sicebisa i-Sonos Beam, eyeyona ibar yesandi egqibeleleyo onokuyibeka ekhayeni lakho, okanye usilele oko, Sonos Inye, indlela yokuqala yokusondela kwindalo ye-Sonos ngexabiso elifanelekileyo, kodwa kuba sithetha ngamaziko emultimedia, sihleli kumgangatho wexabiso lomgangatho / wexabiso kunye nokubheja kweyona premium, iSonos Arc. Asinakuthetha nantoni na ongayaziyo, iDolby Atmos, useto oluphezulu, i-Alexa, iKhaya likaGoogle kunye neKhaya laseKhaya elidityaniswe ngokupheleleyo ... Isizathu kuphela sokungayithengi kukuba kubiza i-euro ezingama-899, kodwa kufanelekile, ngaphandle kwamathandabuzo.
Sikunike ipakethi efanelekileyo yokungena kwi-Alexa kunye nokubeka umculo wakho weSpotify okanye weApple Music, iimveliso zexabiso ezintathu ezahlukeneyo kwaye ezizalisekisa zonke izithembiso zayo.
Ukuzonwabisa kunye nezixhobo
Ukuzonwabisa njengoko sihlala sibheja ngokufunda, siqale ngoKobo Nia, enye yeemveliso ekucetyiswa kakhulu ukuba zivele kwiwebhusayithi yethu engudade TodoeReaders, imveliso ehamba kakuhle kakhulu, eneempawu ezihlengahlengiswe ngakumbi kwixabiso lesixhobo kwaye ezinokwenza ukuba utata wakho ekugqibeleni angene kufundo lwedijithali, iincwadi ze-elektroniki zigcina imali eninzi kwaye ubhetyebhetye kakhulu.
Ukuba into oyikhangelayo yithebhulethi epheleleyo, kunzima ukufumana ubudlelwane obungcono umgangatho / ixabiso kuneHuawei's MatePad 10.4. Ezi iinkcukacha zayo eneenkcukacha:
Inkqubo: Kirin 810
Memoria I-RAM: 4 GB
Ukugcina: I-64 GB yokwandiswa kwe-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB
Isikrini: Iphaneli ye-10,4-intshi IPS LCD kwisisombululo se-2K (2000 x 1200)
Ikhamera yangaphambili: I-8MP ye-Wide Angle kunye nokurekhodwa kwe-FHD
Ikhamera esemva: 8MP kunye nokurekhodwa kwe-FHD kunye ne-LED
Ibhetri: I-7.250 mAh enomthwalo we-10W
Ukuxhuma: 4G LTE, iWiFi 6, iBluetooth 5.1, i-USB-C OTG, iGPS
Isandi: Izithethi ezine zestiriyo kunye nee-microphone ezine
Konke oku ngexabiso elijikeleze i-euro ezingama-219, uhlengahlengiso kakhulu kuthathelwa ingqalelo iimpawu zayo kunye nawo onke amathuba anokusixhasa kwinqanaba lokuzonwabisa. Njengoncedo, ayizi neenkonzo zikaGoogle ezifakwe kwangaphambili, kodwa ungazifaka ngokwakho kamva.
Siphinde savavanya izinto zokucoca ngesandla, imveliso enomdla kakhulu enezinto ezininzi nangakumbi. Umzekelo lolu hlalutyo lwamva nje oluvela kwiTineco, isicoci esiphathwayo esiphathwayo esikwaziyo ukuzikhuhla ngokwaso. Kungumdla ukuba loluphi uhlobo lwenkqubo olunokwenza umsebenzi wethu wemihla ngemihla ube lula.
Umlingo ufika nepaneli ephezulu emhlophe. Sinepaneli yokutshaja yeQi kuyo ngaphandle kwamacingo okubonelela nge-5W yamandla, ilungele ukuthintela ukonakalisa ibhetri kwiirhafu zasebusuku. Sikwanalo nenani elikhulu lamaqhosha aya kusivumela ukuba silungelelanise kwaye siqwalasele i-Wake Up.
Isithethi kunye nenkqubo yemakrofoni
10W amandla apheleleyo
Inkqubo yestereo 2.0
1 x 2,25-intshi 8W izithethi ezipheleleyo
Ukuphindaphinda: 40Hz - 18 kHz ilahleko engaphantsi kwe-1%
I-Bluetooth 5.0 iklasi 2 (HSP - HFP - A2DP kunye neekhowudi ze-AVRCP)
2,4 GHz iWiFi
Idlalwe kunye neSpotify Qhagamshela
IMultiroom iyahambelana ne-ES Smart Somlomo kunye noluhlu lweMultiroom
Igalelo leJack elingu-3,5 mm
5W Qi engenazingcingo
Ungayithenga ngexabiso elifanelekileyo ngqo kwiAmazon nge LE LINK.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ezona zipho zibalaseleyo zobugcisa kusuku lukatata